Maxaa qaraxyada iyo dilalka u diiday Hargeysa -Muqdishana ku saladay ?
Topnews :-Maxaa qaraxyada iyo dilalka u diiday Hargeysa -Muqdishana ku saladay ?
21 June 2013 Waagacusub.com-Goboladda hoos taga Somaliland gaar ahaan degaanada beesha Isaaq kama jiraan qaraxyo iyo dilal ,waxaana Hargeysa lagu dhex arkaa Madaxda Maamulka ,Waxgalkooda oo Nabadgelyo ku taxashaaya faras Magaalaha ,hadaba waxay su-aashu Saraakiisha ugu sareeya Al-Shabaab ee beesha Isaaq u dhashay maxay dilalka iyo qaraxyada ula caashaqeen dadka degan Koofurta Somalia iyo degaanada ku xeeran oo qura, 1- Beesha Isaaq waxay ka mideeysan yihiin ilaalinta Nabadgelyadooda sidaas darteed hadii Ahmed Godane ama Ibrahim Afakhani dilo qof u dhashay beeshaas waxay ogyihiin in walaalahood loogu aarayo , waana sababta koowaad.
2- Tan Labaad horjoogayaasha Al-Shabaab waxay markii hore u tageen Koofurta qorshe Jihaadiya iyo inay ku noolaan waayeen degaanadooda laakiin markii dambe Ganacsato iyo Siyaasiyiin u dhashay beesha Isaaq ayaa ku xirmay ,waxaana loo xilsaaray inay deb ka shidaan Koofurta si Caalamka uga quusto rajada nabad ku dabaalida Somalia gaar ahaan Muqdisho.
3- Dhalinyaro ka badan shan kun una dhashay beesha Isaaq ayaa loo diray Koofurta Somalia si ay u garabsiiyaan dagaalada Al-Shabaab laakiin shantaas kun laba kun oo ka mida waxay hada si Nabadgelyaa ugu nool yihiin degaanadii ay ku dhasheen ee Somaliland gaar ahaan Togdheer iyo Hargeysa,waxaana colaada heerkaan gaarsiisan maleegay shaqsiyaad kooban,iyadoo aysan ka warqabin beelweynta Isaaq badankood.
Ahmed Godane iyo Ibrahim Afakhani waxay dileen dhamaan waxgalkii Koofurta Somalia,waxayna sii wadaan qaraxyada iyo mashruucii qalqalinta Caasimadda Somalia.
Saraakiisha Al-Shabaab ee beesha Isaaq u dhashay waxay burburinta Caasimadda Somalia iyo leynta dadka u dhashay Hawiye ka mideeysnaayeen Saraakiil u dhalatay Hartiga Puntland oo Fuad Shongole ka mid yahay laakiin markii ay dileen Cabduqadir Gacameey ayey ku kala tageen qadiyadda.
Saraakiil ka tirsan Sirdoonka PIS waxay xaqiijiyeen in dhaqaalaha ka soo baxa Dekadda Bosaso %15 la siiyo Saraakiisha Fuad Shongole hogaamiyo ee reer Puntland,iyadoo loogu magacdaray lacagtaas mid ku dabaqan helid xog Sirdoon hasse yeeshee waxay xaqiiqadu tahay in Faroole ku bixiyo sidii Muqdisho loo burburin lahaa.
Faroole qadiyadiisu maaha inaysan Somalia ka dhalan Dowlad Qaran hasse yeeshee wuxuu dagaal xoogan ugu jiraa in Caasimadda Jamhuuriyadda Somalia laga wareejiyo Muqdisho.
Hadii Maamuladda Hargeysa iyo Garowe isku mid ka yihiin in Muqdisho la burburiyo? beesha degan iyo bulshada ku nool maxaa la gudboon?
Waa inay si wadajira uga shaqeeyaan amniga,waana inay ogaadaan inaan la dilin lana qarxin Somaliland iyo Puntland.
Qof walba waa inuu isweydiiyo maxay Ahmed Godane iyo Ibrahim Afakhani u dilayaan waxgalka reer Muqdisho ama beelweynta Hawiye ?
Dadka qaar ayaa ku doodi kara in Hargeysa Nabad tahay laakiin Xarunta UNDP ilaalada joogtay,maanta ma joogtaa UNDP Hargeysa? .
Ujeedku waa Cadaawad fog ,oo siyaasadeed,waana in arrimaha socda lagu eego indho iyo dhega furan.